I-Turkey ayizukubeka zithintelo kubakhenkethi baseRussia
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Turkey ayizukubeka zithintelo kubakhenkethi baseRussia
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseRwanda eziQhekezayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zaseTurkey zokuPhula • Iindaba ezahlukeneyo
I-Turkey ayizukubeka zithintelo kubakhenkethi baseRussia ababizwe nguMbutho wezifo ezosulelayo zaseTurkey
Abasemagunyeni baseTurkey abacwangcisi ukwazisa okanye ukuqinisa imigaqo yococeko kubakhenkethi baseRussia abahamba kwiriphabliki ngeholide.
Usulelo lwaseTurkey lubanga ukuba kuthintelwe iindwendwe ezivela eRashiya.
I-Turkey ayicwangcisi ukuqinisa izithintelo zokuhamba.
I-Turkey yazisa "isiqinisekiso sokhenketho esikhuselekileyo".
Kule mpelaveki, uMehmet Ceyhan, ongusihlalo we-Infectious Diseases Association yaseTurkey, ucele "amanyathelo abukhali ngokubhekisele kubakhenkethi baseRussia" abeza eTurkey ngeholide, "kungenjalo ngekhe kubenako ukunqanda ukukhula kwezifo."
Nangona kunjalo, uCeyhan khange achaze ngokuthe ngqo ukuba le nto kufuneka yenziwe njani kwaye kutheni la manyathelo kufuneka asetyenziswe kubakhenkethi baseRussia kuphela.
Ngokutsho kwindlu yozakuzo yaseTurkey eMoscow, abasemagunyeni baseTurkey abacwangcisi ukwazisa okanye ukuqinisa imigaqo yococeko kubakhenkethi baseRussia abahamba kwiriphabliki ngeholide.
"Abasemagunyeni kwezempilo baseTurkey nabasemagunyeni abaceba ukuthintela okanye ukuqinisa amanyathelo kubakhenkethi baseRussia," utshilo umishini.
I-ofisi yozakuzo ineengxelo ezichaze ugqirha wesifo saseTurkey uMehmet Ceyhan ukuba iTurkey inokuqinisa izithintelo kubakhenkethi baseRussia malunga nokukhula kwe-COVID-19 kweli lizwe.
“Sithanda ukuqaphela ukuba le ngxelo, yenziwe nguMnu. Amagosa ezempilo aseTurkey kunye nabasemagunyeni abaceba ukungathinteli okanye ukuqinisa amanyathelo kubakhenkethi baseRussia, ”utshilo umishini.
"ikarikuni ujongana ngempumelelo nemiceli mngeni ngexesha lobhubhane, enkosi kwinkqubo yezempilo ephucukileyo kunye namanyathelo athathwe ngexesha elifanelekileyo. Kananjalo, iye yazisa 'isiqinisekiso sokhenketho esikhuselekileyo,' esiquka imigaqo nemigaqo yokhuseleko eyimfuneko ukuze kuqinisekiswe ukuhlala okukhuselekileyo nokundwendwela iindwendwe zelizwe, ”yongeze loo nto.